किन हुन्छ हृदयघात ? हृदयघात हुन नदिन के गर्ने ? - Naya Pageकिन हुन्छ हृदयघात ? हृदयघात हुन नदिन के गर्ने ? - Naya Page
काठमाडौं,माघ ११ । मुटु विशेष किसिमको मांशपेशीले बनेको अङ्ग हो । यसले रगतलाई पम्प गरी रक्तनलीहरु मार्फत विभिन्न अङ्गहरुमा पुर्याउने काम गर्दछ । औसतमा प्रतिमिनेट ७० देखी ८० पटकसम्म धड्किने मुटुलाई आफ्नो कार्य नियमित र सुचारु रुपमा गर्नका लागि यथेष्ट मात्रामा अक्सिजन, ग्लुकोज तथा अन्य विभिन्न खाद्यपदार्थ एवं खनिज पदार्थ एवं खनिजहरु जस्तै सोडियम, पोटापसियम, क्याल्सियम आदिको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि मुटुको मांशपेशीभित्र साना तथा मझौला खालका रगतका नलीहरु हुन्छन् । जसलाई मुटुको धमनी वा कोरोनरी आर्टरी पनि भनिन्छ ।
हृदयघातबाट बच्नका लागि के गर्ने डा. लम्सालको सुझाहरु यस्तो छन ।
नियमित स्वस्थ खानपान गर्ने र नुन तथा चिल्लो पदार्थ कम खाने बढी फाइबरयुक्त फलफूल तरकारीको नियमित सेवन गर्ने ।
हृदयघातका कारण विश्वमा १ करोड ७५ लाख मानिसको हरेक बर्ष मृत्यु हुने गर्दछ । हाल नेपाल लगायतका विकासोन्मुख राष्ट्रमा पनि यसको प्रकोप बढ्दै गैरहेको छ ।
विभिन्न उपचार पद्धतीका तथा औषधीको बाबजुत हृदयघात भैसकेपछि मृत्युदर अझै नै उच्च नै छ तसर्थ रोग लाग्न नदिन उचित जीवनशैली अनुसरण गर्दा राम्रो र आम मानिसले यस महारोग सम्बन्धी न्युनतम जानकारी राख्ने तथा मुटुरोगको जोखिम बढी भएका ब्यक्तिहरुले नियमित परिक्षण गराउने माथि उल्लेखित लक्षणहरुको केही सङ्का भएमा तुरुन्त अस्पताल गई परिक्षण गर्नु पर्दछ ।
५५५ पालिकाको मत परिणाम : कांग्रेस २४८, एमाले १५७ र माओवादी १०२ वटामा विजयी
सुनकोसीमा तिमल्सिना, जुगलमा माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन विजयी